यस्ता छन अक्षय कुमारका छोरा, उनको सुन्दरले कयौ युवती घायल ! – Online Khabar 24
यस्ता छन अक्षय कुमारका छोरा, उनको सुन्दरले कयौ युवती घायल !
अक्षय कुमारका छोरा आरव भाटिया १९ वर्ष पुगेका छन् ।
आरव निकै क्षमतावान छन् । उनी आफ्ना पिताजस्तै मार्शल आर्टस्मा ट्रेन्ड छन् । आरवसँग ब्राउन बेल्ट छ । उनले जूडो नेशनल च्याम्पियनशिपमा गोल्ड मेडल जितेका छन् । आरवको चार्मिङ पर्सनालिटी र गुड लुक्स धेरैजसो चर्चामा छाइरहन्छ । आरवको नाममा इन्स्टामा थुप्रै फ्यानक्लब बनेका छन् जहाँ आरवका क्यान्डिड तस्बिर र सेल्फी भाइरल भइरहन्छन् । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevजब आफ्नो छोराको नि’धन हुने बित्तिकै मुटु प्रत्यारोपण गरि बाँचेका युवक ति आमालाई भेटन् जादा…
nextगहिरो प्रेम मा रहेर इन्गेजमेन्ट समेत गरेका अक्षय र शिल्पाको सम्बन्ध यो एक कारणले गर्दा बिग्रिएको थियो ?